Polyurethane ụfụfụ Factory | China Polyurethane ụfụfụ Manufacturers, Suppliers
Hot Sale agbanwe agbanwe Polyurethane Liquid Waterproof mkpuchi Ji maka mmiri ehi ehi ke Building
Polyurethane Liquid Waterproof mkpuchi bụ ihe na-eme ka mmiri gwọọ ihe na-eme mmiri mmiri, na-etolite ihe nkiri na-enweghị ntụpọ site na ịmịkọrọ mmiri site na ikuku; na-akwa mgbanwe na elongation, ike ike substrates deformation, waterproof ndụ ruo 15 afọ. Product Uru: 1.Require nke mmiri ọdịnaya isi N'ezie adịghị aka ike, nwere ike ịbụ na ọzọ ooh isi ihu ewu, nwekwara ike ịbụ na ọnọdụ na ikwu iru mmiri bụ ibu ewu. 2. Polyurethane mkpuchi ...
Mmanụ isi Polyurethane ụfụfụ maka ntọala mmelite nke mmiri mmiri
Isi Ndenye Nkọwa Akwụkwọ ikike: 1 Afọ Mgbe-ire Service: Online oru nkwado Project Ngwọta Ike: ụdịdị imewe Ebe nke Si Malite: Zhejiang, China Brand Name: boyu Model Number: GF001 Type: Water stop, Other Waterproofing Materials Material: polyurethane, Polyurethane Shape : ụfụfụ Isi ihe: polyurethane Format: ụfụfụ ojiji: Buildinglọ mkpuchi Ọrụ: Injection Resin Certificates: ISO9001 Feature: Frost Proof Weight: 10kg Key Word: Liquid Polyu ...
Water base Polyurethane ụfụfụ ihe Waterproof resin mkpuchi
Ihe mkpuchi mmiri nke polyurethane na-ekpuchi mmiri bụ ihe mmiri na-eme ka mmiri ghara ịmị mmiri, ọ bụ maka iwu ihe na akọrọ, mmiri mmiri, mgbe mkpuchi ya ga-agwọta, bụrụ ihe na-adịgide adịgide, nke na-agbanwe agbanwe, nke na-adịghị egbu egbu, nke na-enweghị mmiri na-enweghị mmiri. O nwere ihe mkpuchi mmiri nke polyurethane na mmiri na-agbaze mmiri, bụ ụdị ụdị gburugburu ebe obibi na-enweghị mmiri. Ihe Njirimara: 1. Ngwaahịa a bụ agba, enweghị taa, okpukpu abụọ (otu) mmiri na-ekpuchi mmiri. 2.Cold ewu, mfe technology ...
Na-agbanwe Polyurethane Pu Waterproof mkpuchi maka Building mkpuchi
Isi: The ngwaahịa bụ nke Bi-akụrụngwa chemical mmeghachi omume gwọọ waterproof ihe onwunwe, ụdị nke gburugburu ebe obibi-echebe ngwaahịa. Mgbe ọ gwọchara ya, ngwaahịa ahụ na-emepụta akwa na-enweghị mmiri na mmiri na-agbanwe agbanwe, nke na-eme ka mmiri sie ike na enweghị ike ịrụ ọrụ ngo, ọkachasị site na ike dị elu na ductility, yana mgbatị siri ike maka ịkụcha ma ọ bụ ịda mbà nke isi. Ọ bụ ụdị oyi etinyere waterproof mkpuchi. Dị mfe iji, naanị mkpa mix akụrụngwa A na B ...